SalesRep.ai: U Adeegsiga Sirdoonka Si Looga Hawl Galiyo Isdhexgalka Rajada Badan ee Channel-ka Badan. Martech Zone
Jimce, Maarso 9, 2018 Arbacada, Oktoobar 28, 2020 Douglas Karr
Sida muuqaalkan laga soo duubay Iibka bandhigyo, qayb weyn oo ka mid ah waqtiga iibka dibedda ayaa lagu bixiyaa isku xirka ama jadwalka si loola xiriiro macaamil. SalesRep waxay u adeegsaneysaa otomaatig wicitaan leh istiraatiijiyad istiraatiijiyadeed oo luuqad dabiici ah si ay uga qaado dadaalkaas kooxdaada iibka dhabarkiisa, iyaga oo awood u siinaya inay diirada saaraan feejignaanta oo dhan iibka - maahan isku xirnaanta
Barxadku wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay dhisaan nidaamyada jadwalka ah ee isticmaalka emayl, cod, iyo fariin SMS ah.
Riixitaanka badhanka badhanka ee CRM-gaaga ayaa bilaabaya nidaamka dabagalka hogaamiye kasta oo qofka iibkaagu u baahan yahay inuu ku xirnaado. SalesRep waxay la socotaa raadadka bilooyin bilaa daal ah. Markii aan heshiis la sameynin inta lagu jiro xiriirka, ku dar hogaaminta safka nidaamka dabagalka iyo madal ayaa sameyn doonta inta hartay.
Noocyada Muhiimka ah ee SalesRep waxaa ka mid ah:
Lasoco taxanaha - Socodka waxqabadka ee wicitaanada, qoraallada iyo nidaamka emaylka ayaa fulin doona si loola socdo hoggaamiye kasta oo gaar ah. SalesRep.ai waxay si dhow ula shaqeysaa ururkaaga si aad u dejiso jaangooyooyin ku saleysan halka uu marayo wareegga iibka ee hogaamintaadu tahay. Haddii aadan waligaa lahadlin hogaan, talaabooyinka isku xigxiga ee saxda ah ayaa laqaadayaa. Haddii aad dabagal ku sameyso iibkii hore wac mid ka duwan ayaa la bilaabay. Ku dar habraac kasta oo dabagal ah oo loo baahan yahay SalesRep.ai.
Telefoon kula soo wac maxaliga ah joogitaanka - SalesRep.ai ayaa kuugu yeeri doonta hogaaminta adiga magacaaga had iyo jeer iyo inta aad rabto. SalesRep.ai ayaa ka soo wici doona lambarada maxalliga ah dhibna kama qabi doonaan wakiilladaada illaa ay ka helayaan hoggaanka khadka. Marka ay sameeyaan - SalesRep.ai ayaa u sheegi doonta waxa wicitaanku ku saabsan yahay ka dibna wuxuu ku xirmi doonaa wakiilkaaga ama waaxda qaadashada. Haddii hoggaanka aan la heli karin, SalesRep.ai wuxuu ka tagi doonaa farriin cod ama wuu dallacayaa si uu dib ugu soo waco waqti dambe.
AI SMS iyo fariimaha emaylka - SMS waxaa laga diraa lambarada maxalliga ah, E-mayllada waxaa laga soo diraa xisaabaadkaaga gaarka ah sida haddii ay dirayaan oo kale. Iyada oo la adeegsanayo aaladda 'AI', marka 'SaleRep.ai' uu farriin ka helo hoggaanka, wuu fahmi karaa macnaha oo uu ku dhaqmi karaa. AI si edeb leh ayey u joojin kartaa ama u daahin kartaa isku xigxiga; Jadwal ama Jadwal u samee wicitaan; oo ka jawaab su'aalaha fudud si aanad ugu baahnayn.
Waa kan shaashadda sida ugu horumarsan mashiinkooda isku xigxiga loo qorsheyn karo:
Nidaamku waa mid dhameystiran, oo awood u leh inuu ku dhex quusto macaamil kasta, macaamil kasta, iyo jawaab kasta.
Xitaa waxay bixiyaan kordhinta Chrome:
Isdhexgalka waxaa ka mid ah Salesforce, Velocify, Microsoft Dynamics, Hubspot, iyo Infusionsoft. Isticmaalka SalesRep.ai, shirkaduhu way iska ilaalin karaan inay lumiyaan macaamiisha, waxay u fasaxi karaan waqtiga iibka iibinta, ugu dambayntiina waxay xiri karaan macaamiil badan.
Tags: aidejinta ballantasirdoonka crmhubsashoInfusionsoftDynamics Microsoftdejinta ballanta iibkaotomaatiga iibkawicitaanada iibkataxanaha iibkaiibiniibintasalesrep.aixawaare
Goorma Amaahi Kartaa Oo Isticmaali Kartaa Sawir Online Ah?